Endrik'io pejy io tamin'ny 28 Martsa 2021 à 10:53
430 octets ajoutés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 31 Jolay 2019 à 10:50 (hanova)
Endrika tamin'ity 28 Martsa 2021 à 10:53 ity (hanova) (esory)
Pejy ao amin'ny Testamenta Vaovao
]]Ny [[Testamenta Vaovao|'''Testamenta''' '''Vaovao''']] dia fizaràna faharoa amin' ny [[Baiboly]] kristiana izay voasoratra taorian' ny nahaterahan' i [[Jesosy|Jesoa Kristy]]. Izy no mirakitra ny tantaram-piainana sy ny fampianarana nataon' i Jesoa, araka ny finoan' ny Kristiana, sy ny tantaran' ny fiforonan' ny fiangonana kristiana voalohany. Ny Testamenta Vaovao dia tsy isananisan' ny [[Tanakh|Baiboly hebreo]]. Voasoratra tamin' ny taonjato voalohany taor. J.K. Nyny Testamenta Vaovao dia ataon'ny Vavolombelon'i Jehovah hoe "Soratra Grika Kristianina".
Ny hoe ''Testamenta Vaovao'' dia fanagasiana ny [[Fiteny latina|teny latina]] ''Novum Testamentum'' izay fandikana ny teny grika ''Ἡ'' ''Καινὴ Διαθήκη'' / ''Hê Kainề Diathếkê,'' izay midika hoe "fanekena vaovao", "fifanarahana vaovao" na koa "fanekem-pihavanana vaovao". Ny [[Testamenta Taloha]] dia azo adika ara-bakiteny hoe "fanekem-pihavanana taloha".
== Fizaràn' ny Testamenta Vaovao ==
Misokajy efatra ny boky ao amin' ny Testamenta Vaovao, dia ireo [[Filazantsara]] (atao hoe koa Vaovao Mahafaly na Evanjely), ny ''[[Asan'ny ApostolyApôstôly|Asan' ny Apôstôly]]'', ireo [[Epistily]] ary ny ''[[ApokalipsyApokalipsin'i Joany|Apôkalipsy]]''. Nisy ireo olona nanoratra testamenta izay tsy noraisina ho [[kanonaKanonan'ny Baiboly|kanôna]]. Ireo no atao hoe [[testamenta apokrifa]].
Misy efatra ny Filazantsara na Evanjely na Vaovao Mahafaly, dia ireto avy:
* [[Filazantsara araka an'i Matio|Filazantsara araka an' i Matio]]
* [[Filazantsara araka an'i Marka|Filazantsara araka an' i Marka]]
* [[Filazantsara araka an'i Lioka|Filazantsara araka an' i Lioka]]
*[[Filazantsara araka an'i Joany|Filazantsara araka an' i Jaona]].
Atao hoe [[Filazantsara synoptikasinôptika|Filazantsara mitovy fijery]] (na sinoptikasinôptika) ireo Filazantsara telo voalohany satria mitovitovy sy mifameno ny zavatra lazainy. Matetika ny teny hoe ''Filazantsara'' na ''Vaovao Mahafaly'' dia entina hanondroana ny Testamenta Vaovao manontolo.
Marihina fa ny anaran' ny boky ao amin' ny [[Baiboly protestantaprôtestanta amin' ny teny malagasy]] ireo naseho eo ambony ireo. Ny [[Baiboly katolikakatôlika amin'ny teny malagasy|Baiboly katôlika amin' ny teny malagasy]] dia mampiasa ny hoe ''Vaovao Mahafaly'' ho solon' ny hoe ''Filazantsara'' ary ny anaran-tsamirery ao amin' ny anaran' ny boky dia ialohavan' ny hoe ''Masindahy'' izay hafohezina amin' ny hoe ''Md''. Ireto ny anaran' ny boky ao amin' ny Baiboly katolikakatôlika: ny ''Vaovao Mahafaly nosoratan' i Masindahy Matio,'' ny ''Vaovao Mahafaly nosoratan' i Masindahy Marka,'' ny ''Vaovao Mahafaly nosoratan' i Masindahy Lioka'' ary ny ''Vaovao Mahafaly nosoratan' i Masindahy Joany''.
Maro ireo nanoratra filazantsara izay tsy voaray ho ao amin'ny Baiboly kristiana. Ireo no atao hoe [[filazantsara apokrifa]] na evanjely apokrifa.
=== Ny Asan' ny ApostolyApôstôly ===
Ny ''[[Asan'ny ApostolyApôstôly|''Asan' ny Apostoly''Apôstôly]] (na ''Asan'ny Apôstôly'') dia mitantara ny fiainan' ny fiangonana kristiana tany am-piandohana. Tohin' ny ''[[Filazantsara araka an'i Lioka|Filazantsara araka an' i Lioka]]'' izy. Maro koa ireo nanoratra boky atao hoe ''Asa'' nefa io iray io ihany no noraisina ho [[Kanona|kanonikakanônika]]. Ireo no atao hoe [[Asa apokrifa|Asa apôkrifa]].
=== Ny Epistily ===
Misy 21 ny isan' ny epistily izay azo sokajina roa dia ireo nosoratan' i [[Apostoly Paoly|Paoly]] sy ireo nosoratan' ny ApostolyApôstôly hafa, izay atao hoe [[Epistily katolikakatôlika]].
==== Epistily nosoratan' i Paoly ====
Ny [[Epistily ho an'ny Hebreo|Epistily ho an' ny Hebreo]] dia iarahan' ny mpikaroka maro manaiky fa tsy nosoratan' i Paoly. Ireto kosa ireo izay atao hoe nosoratany na dia misy aza ny fanoherana ny maha an' i Paoly ny fanoratana ny sasany:
* [[Epistily ho an'ny Romana|Epistily ho an' ny Romana]]
* [[Epistily voalohany ho an'ny Korintiana]]
* [[Epistily faharoa ho an'ny Korintiana]]
* [[Epistily ho an'i Filemona|Epistily ho an'i Filemona.]]
==== Epistily katolikakatôlika ====
Ny Epistily katolika dia ireo epistily nosoratana ho an'ny olon-drehetra na ny fiangonana rehetra tsy an-kanavaka fa tsy ho an'olona na fiangonana manokana. Ireto avy izy ireo:
* [[Epistily nosoratan'i Jakoba]]
* [[Epistily nosoratan'i Joda]]
Ny anaran'ny boky ao amin'ny Baiboly protestantaprôtestanta amin' ny teny malagasy ireo nomena eo ambony ireo. Ny hoe ''katolika'' eto dia midika hoe "ho an'ny olon-drehetra", "ho an'ny fiangonana rehetra tsy an-kanavaka". Misy epistily hafa izay tsy voaray ao anatin'ny Baiboly kristiana izay atao hoe [[epistily apokrifa|epistily apôkrifa]].
Ny anaran'ny boky sasany ao amin' ny Baiboly katolikakatôlika amin'ny teny malagasy dia nanaraka ny fomba fampisampanan-teny na ny fanononana frantsay: ireto avy ny tena miavaka: ''Efezianina'' (fa tsy ''Efesiana'')'','' ''Tesalônisianina'' (fa tsy ''Tesaloniana'')'','' ''Timôte'' (fa tsy ''Timoty'')'','' ''Tito'' (fa tsy ''Titosy'')'','' ''Piera'' (fa tsy ''Petera'') ary ''Jodà'' (fa tsy ''Joda''). Ao koa ny hoe ''Hebrio'' (fa tsy ''Hebreo'').
=== Ny ApokalipsinApôkalipsin' i Joany ===
Ny ''[[ApokalypsinApokalipsin'i JaonaJoany|ApokalipsinApôkalipsin' i Joany]]'' izay tsorina amin' ny hoe ''ApokalypsyApokalipsy na Apokalipsa'', dia boky farany ao amin' ny Testamenta Vaovao ao amin' ny Baiboly kristiana. Ampiana ny anaran' i Joany (na Jaona) ny anaran' io boky io satria maro ny nanoratra apokalypsyapôkalipsy izay tsy voaray ho isan' ny Baiboly. Atao hoe [[apokalypsyLiteratiora apokrifaapokaliptika|apokalipsyapôkalipsy apokrifaapôkrifa]] izy ireo.
* [[Apokrifan'ny Baiboly|Boky apokrifaapôkrifa]]
* [[Filazantsara apokrifa|Filazantsara apôkrifa]]
* [[Apokalypsy apokrifa|ApokalipsyApôkalipsy apokrifaapôkrifa]]
* [[Asa apokrifa|Asa apôkrifa]]
* [[Epistily apokrifa|Epistily apôkrifa]]
* [[Baiboly malagasy]]
* [[Testamenta Taloha]]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/1010418"